Soo dejisan LG PC Suite 5.3.28 – Vessoft
WindowsMultimediaTelefoonkaLG PC Suite
Bogga rasmiga ah: LG PC Suite
LG PC Suite – software ah si aad ula xariirtaan maareeyo qalab LG ah. Software waxay bixisaa xiriir ah oo loo isticmaalayo USB ama Bluetooth cutubyadii iyo awood u tahay in la xakameeyo hawlaha wax ka mid ah qalabka. LG PC Suite kuu ogolaanayaa inaad waafajinta xog kala duwan oo u dhexeeya a qalab, computer iyo goobta rasmiga ah ee horumariyaha. Software ka kooban qalab ay u maqli karo waxa ku jira, gurmad, goobidda iyo saxaa faylasha. LG PC Suite leeyahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
.Wadashaqayntaas Dhexeeya qalab iyo computer
Sarrifka haboon ee files
Management of hawlaha qalabka
Interface dareen leh
العربية, English (United States), Українська, Français...
Soo dejisan LG PC Suite
Faallo ku saabsan LG PC Suite
LG PC Suite Xirfadaha la xiriira
Media Go – waa xallin aad u wanaagsan oo lagu abaabulo laguna ciyaaro faylasha warbaahinta kombiyuutarkaaga, iyo sidoo kale wareejinta faylasha warbaahinta ee u dhexeeya aaladda kumbuyuutarka iyo Sony.
software The synchronizes your computer la Qalabka shirkadda Samsung. Waxay leedahay fursadaha ballaaran si ay ula shaqeeyaan qalabka iyo taageerada noocyada kala duwan ee la xidhiidha.
Tababaraha The ee telefoonada gacanta ka shirkadda Nokia ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan faylasha, xiriirada, fariimaha iyo xiran xogta la your computer.
EaseUS MobiSaver ee loogu talagalay Android – waa barnaamij software ah oo dib loogu soo ceshado xogta lumay ama si shil ah looga tirtiray telefoonada gacanka, kiniiniyada iyo SD-Card aaladda gudaheeda.
Tani waa qalab wax lagu duubo oo fiidiyow oo taageera dhamaan qaababka casriga ah ee casriga ah iyo qalabka si loogu diyaariyo faylasha lagu diiwaangeliyo qalabka kala duwan ama adeegga fiidiyaha.
Mp3DirectCut – tifaftire maqal oo fudud oo la shaqeeya MP3-faylalka. Softiweerka waxaa ku jira aaladaha lagu caburiyo raadadka codka maqal la’aan.
Baidu PC Faster – waa aalad lagu ilaaliyo oo lagu habeeyo kombuyuutarkaaga. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka saarto feylasha aan loo baahnayn ama aan laga maarmin waxayna taageeysaa iskaanka daruuriga daruuriga ah.